Shan Faa'ido Oo Ku Jirta Inaad Guursatid Nin Dhallinyaro ah - Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA Shan Faa’ido Oo Ku Jirta Inaad Guursatid Nin Dhallinyaro ah
Shan Faa’ido Oo Ku Jirta Inaad Guursatid Nin Dhallinyaro ah
Yaa yiri waa inaad mar kasta shukaansataa nin aad isku da’ tihiin ama kaaweyn?
Ma sameyn karnaa waxyaabo macquul ah oo iska caadi ah? Maadaama aanan meel lagu qarin ama waa qasab inaad shukaansatid qofaa isku da’ tihiin aanan la dhihin, waa inaad dareentaa xornimo aad wax ku sahmiso.
Dhab ahaantii hadii aysan kuu suurtagalin ama uu kuu socon waayay xiriirka ragga waaweyn waxaa wanaagsan inaad fursad siisid da’yarta waadna layaabi doontaa sida qotada dheer ee ay kuu jeclaan doonaan.
Si,kastaba, Aayaha Online, waxay idiin soo gudbineysaa faa’idada kujirta inaad shukaansatid nin kaa da’yar ama dhallinyaro ah.
Kuwanaagsan ciyaarta sariirta
Tani ma ahan mid laga doodi karo, bood boodka iyo shaqada ay qabtaan ragga marka ay ku jiraan da’da 20-ka aad ayuu u sareeyaa halka haweenka ay gaaraan 30 iyo 40 sano xilligaas oo ay shaqo badanyihiin sidaa darteed, Nin weyn marnaba ciyaar wanaagsan ama galmo wanaagsan ugama heleeysid sida aad uga heleeysid nin da’yar ama dhallinyaro ah, marka haddii aad isku da’ tihiin adiga iyo ninka waxay ka dhigantahay in ninkaaga uu si deg deg ah u yareeyo dalabaadka ciyaarta sariirta marka aad adigana u baahantahay kulan adag.
Ku wanaagsan dalxiiska iyo waqti wada qaadashada
Dhallinyarada waa kuwa jecel inay la joogaan lamaantooda ama la socdaan, waxaad heli doontaa waqtiyo fiican oo isugu jira habeenno iyo maalmo qurux badan waxay jecelyihiin inaad dalxiis wada aadaan oo waqti aad soo wada qaadataan.
Ku faraxsan helitaankaaga ama nolosha kula qeybsado
Nin dhallinyaro ah had iyo jeer wuxuu kugu qadarinaa inaad ka weyntahay isla markaana aadka qibrad badantahay, wuxuu qadarinaa inuu adiga kuhelay isagoo sameynaya wax allaale iyo wax walba uusameyn karo si nolosha uukuula qeybsado.
Ma dareemi doontid xumaantii ay horey kuugu soo geysteen raga waaweyn waxaad sidoo kale u noqon doontaa macallin iyo qofka haga, maxaa kale oo aad uga baahnaan lahayd oo intaas kabadan?.
Waa kuwo maskax furan
Lama mid ahan kuwa waa weyn, ragga da’da yar had iyo jeer waa kuwo umaskax furan fikrado cusub, waxaad wax kabari kartaa cashirro cusub oo ku saabsan sariirta ama ganacsi, durba wuu qabanayaa.
Kama maqleysid waxyaabo ku saabsan saaxiibteey hore ama xaaskeygi hore ama furriin iyo wax lamid ah, waa nadiif hadeey u badatana wuxuu soo maray dhowr xiriir oo aanan dhab ahayn marka farxad ayay kuu tahay inaad ogaatid inaad adiga leedahay oo uusan jirin sadexeeye.
Aragtidaada waa muhiim, fadlan hoos noogu reeb fikirkaaga adigoo mahadsan.
Previous articleRagga Oo Lixdaan Meelood Ka Eega Dumarka
Next articleAfartaan Calaamadood Gabadha aad ku aragto Ninyohow weyku nacday ee horey uga soco